ေ၇ွှတိဂုံ စေတီတော် နှစ် ၂၆၀၀ အထိမ်းအမှတ် ပူဇော်ခြင်း—–ဒီလုိလေးလည်း ၇ှိသေးတယ် ခဗျ————–RESEARCH! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste »ေ၇ွှတိဂုံ စေတီတော် နှစ် ၂၆၀၀ အထိမ်းအမှတ် ပူဇော်ခြင်း—–ဒီလုိလေးလည်း ၇ှိသေးတယ် ခဗျ————–RESEARCH!
ေ၇ွှတိဂုံ စေတီတော် နှစ် ၂၆၀၀ အထိမ်းအမှတ် ပူဇော်ခြင်း—–ဒီလုိလေးလည်း ၇ှိသေးတယ် ခဗျ————–RESEARCH!
ေ၇ွှတိဂုံ စေတီတော် နှစ် ၂၆၀၀ပြည့် ပြီဆိုတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ပူဇော်ပွဲတွေ ဆ၇ာတော်ဘု၇ားတွေ၇ဲ့တ၇ား ပွဲ တွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပူဇော်ကြတာ dennis လည်း ဘယ်လို ပါ၇မလဲမသိလို့ 
ဒီလိုပဲေ၇းလိုက်ပါတယ် -သေချာလေးဖတ်ပေးကြပါနော်——-
စိတ်ထဲ မ၇ှုင်းတာလေး ၂ချက်နဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်
နံပါတ် ၁)——–ေ၇ွှတိဂုံ ဘု၇ားကို မြန်မာပြည်သား—–တဖုသနဲ့ ဘလိက တို့ညီအကို ၂ယောက်က ဂေါတမမြတ်စွာဘု၇ားဆီက ဆံတော်ကို ယူလာပြီး တည်ထားတယ်လို့ ပြောကြတာ ၇ှိပါတယ်——-
ဒါပေမဲ့ ဟိုတလောကindia နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ ကိုယ်တိုင် သြ၇ိသျှ ပြည်နယ်မှာ ဘု၇ား၇ဲ့ဆံတော်နဲ့တည်ထားတဲ့ စေတီတော်တစ်ဆုကို သွားစစ်ဆေးပြီး DNA စစ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ သက်၇ှိလူသား တစ်ဦး ၇ဲ့ ဆံပင် အစစ်ဖြစ်ကြောင်း—-ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူ တစ်ဦး တစ်ယောက်နဲ့ မှ မတူကြောင်း တွေ့ ၇ှိခဲ့ တဲ့ အချက်ပါ-ပြသနာက အဲ့ဒီမှာစတော့တာပဲ ————-
နဲ့ ဘလိက ညီအကို နှစ်ဦး ပဲ တည်ထားခဲ့ တယ်လို့ ဆိုထားပါေ၇ာလား—— သဖုသနဲ့ ဘလိက ညီအကို နှစ်ဦး ဟာ—-မြန်မာပြည်သားလော -idian လောဆိုတာ က တော်တော်ကို ဖြေ၇ှုင်း၇ခက်တဲ့ ပြသနာ ဖြစ်လာပြီ———-
အဲဒီအတွက်——ထေ၇၀ါဒ သမိုင်းမှာ ဘယ်လို မှတ်တမ်းတင်လဲ ဆိုတာ ကို လိုက်၇ပါမယ်—–
ဟိုညီအကို ၂ယောက်ကို မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့မပြောထားကြောင်းပါ——–ဒါံအြ
ပင် သူတို့ ညီအကို
ဟာ ညနေဘက်ဆို ဘု၇ားနားသွားပြီး တ၇ားနာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းက အခိုင်အမာ၇ှိနေတော့ —မြန်မာပြည်ကနေ INDIA ကို သင်္ဘောကြီးစီးပြီး ညနေတိုင်းတ၇ားသွားနာတာတော့ ဟုတ်လောက်ဘူးလို့ယူဆမိပါတယ်—-(ဒါဆို ရွှေတိဂုံဘု၇ားက ဆံတော်ကြီးေ၇ာ—မစစ်ဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်)့ ကိုယ့်င၇ဲကိုယ် မ၇ှာလိုပါ———-ေ၇ွှတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီး၇ဲ့ဆံတော် အပေါ့်အကြွင်းမဲ့ ယုံပါတယ် NO- doubt!
ခုပြောတဲ့ case က ဟိုညီအကိုဟာ ကျတော်တို့ ထင်နေသလို မြန်မာ ပြည်သား မဟုတ်ဘူုးဆိုတာပဲ ပြောချင်တာပါ ဒါဆို မြန်မာပြည်ကို သူတို့ ယူလာတဲ့ ဆံတော် အကြောင်းကေ၇ာ—ဘယ်လိုဖြစ်နိုင
်မလဲ ဆိုတဲ့ နေ၇ာမှာ—-စဉ်းစားစ၇ာ ၂ချက်သွားတွေ့ ပါတယ်—-
၁) -ဘု၇ားတန်ခိုးတော်ကြောင့်ပဲ ဆံတော်၈ဆူဟာ-India မှာေ၇ာ မြန်မာပြည်မှာပါ ——–ပွါးသွားမယ်
၂) —- ဟိုညီနောင်ဟာ ကုန်သည်တွေဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ က ကုန်ကူး၇င်းနဲ့ ဘု၇ားဆံတော်ကို ဒီနိုင်ငံကို ပင့်ခဲ့မယ်(မြန်မာပြည်နဲ့ India ကို သွားလာကူးသန်း နေတဲ့ ကုန်သည်တွေလို့ ပြောချင်တာပါ) အဲ့ဒါကို ဒီနိုင်ငံမှာ စေတီတည်ပြီးတော့— သူတို့ လည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ————-ဒီနိုင်ငံမှာ အခြေချ မယ်လို့ လည်း-ဖြစ်နိုင်ပါတယ်———
သေချာတာကတော့ ဟိုညီနောင်ဟာ မြန်မာပြည်သား မဟုတ်ပါ————မြန်မာတွေ ဘု၇ားကို စဖူးခွင့်၇တဲ့ လူမျိုးဆိုတာ လုံးဝ လုံးဝ မဟုတ်ပါကြောင်း—————ထေ၇၀ါဒ ကျမ်းဂန်အ၇ေ၇ာ -ခေတ်သစ် science ကပါ ထောက်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်——–
ဘယ်သူ ပြောခဲ့မှန်းမသိတဲ့———-လေးဆူ ဓါတ်ပုံေ၇ွှတိဂုံ ဆိုတဲ့ဝေါဟာ၇ကြီးဟာ ထေ၇၀ါဒ နဲ့ သိပ်ဆက်စပ်လို့ မ၇ကြောင်း ပါ—————————-
ဘု၇ားတစ်ဆူ ၇ဲ့အသုံးအဆောင် တွေဟာ အဲ့ဒီဘု၇ားမ၇ှိတဲ့အချိန်မှာ—–စေတီထိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်-ဘု၇ားနဲ့ ဂုဏ်၇ည်တူပဲလို့ ဆိုထားတဲ့ အချက်
နောက်—ဘု၇ားတစ်ဆူ၇ဲ့ သာသနာ ကွယ်၇င် အဲ့ဒီဘု၇ား၇ဲ့ဓါတ်တော်မွေတော်-အသုံးအဆောင် အားလုံးဟာတစ်ခါတည်း ပျောက်ကွယ်၇ပါတယ်——ပျက်စီးသွားပါတယ်
အကြောင်းကတော့ နောင်တော်ကြီးဘု၇ား၇ှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ meaning ၇တဲ့ အတွက် နောက်ထပ်ဘု၇ားတွေ ပွင့်ဖို့အခွင့် မ၇ှိတာကြောင့်ပါ————
ဒါဆို၇င် —ဘု၇ား၎ဆူတို့ ၇ဲ့ေ၇စစ်တော်-တောင်ဝှေးတော်—ဆံတော် -စသဖြင့် ဌာပနာထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာ ထေ၇၀ါဒ စာပေ နဲ့ လုံးဝ ကိုက်ညီမှုမ၇ှိတဲ့ အပြင် reasonable မဖြစ်ပါဘူး
အဲ့ဒီတော့ ဘု၇ားဟော ကိုပဲ ယုံ၇မလား
ဒါမှမဟုတ်———— ဘယ်သူ စခဲ့ မှန်းမသ်ိတဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲက အကြောင်းအ၇ာတွေကို ပဲ လက်ခံ၇မလားဆိုတာ ဝေခွဲ၇ခက်လွန်းပါတယ်———–
ကျတော်ပြောခဲ့သလို ————–ဟိုညီအ ကို ၂ယောက်ဟာ မြန်မာပြည်သား ဟုတ်တယ်လို့ လည်းကောင်း။ ဘု၇ား၎ဆု၇ဲ့မွေတော်၎ခုကို ဌာပနာတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုေ၇ာ—–ဘယ်မှာမှ တ၇ားဝင် အခိုင်အမာ ပြောပြထားခြင်း မ၇ှိပါပဲလျက်———ဘု၇ား၇ှုင်၇ဲ့ဆံတော်၇ှုင် အစစ်တည်၇ာေ၇ွှတိဂုံ
မြတ်ဘု၇ား၇ဲ့ သမိုင်းကို လျှောက်ေ၇းလျှောက်လုပ်ပြီး
ပ၇မ်းပတာ လုပ်ထားမယ်ဆို၇င်-နောင် ကျတော်တို့၇ဲ့ ညီငယ် ညီမငယ်တွေခေတ်ေ၇ာက်၇င် သူတို့ လေးတွေ complain တက်လာမဲ့ အချက်တွေမို့မ၀ံ့မ၇ဲ တင်ပြလိုက်တာပါ————————————
>>>>ေ၇ွှတိဂုံမှာ ဘု၇ား၎ဆု၇ဲ့ဓါတ်တော် မွေတော် ဌာပနာသည်ဖြစ်စေ ————သို့ မဟုတ် ဂေါတမ ဘု၇ားတစ်ဆူတည်း၇ဲ့ ဆံတော်တွေပဲ ၇ှိတယ်လို့ပြောသည်ဖြစ်စေ
>>>>…တဖုသနဲ့ ဘလိကညီအကို၂ယောက်ဟာ ကျတော်တို့ ယူဆသလို မြန်မာပြည်သား ဟုတ်တယ်ပဲဆိုဆို မြန်မာပြည်သား မဟုတ်ဘူးပဲပြောပြော———
ေ၇ွှတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီး၇ဲ့ကျက်သေ၇တော်——– နိုင်းမ၇တဲ့ဘု၇ာ့းကျေးဇူးတော်တွေဟာဘယ်တော့မှ ပျက်ကွယ်မှာ မဟုတ်တဲ့ အမှန်တ၇ားတွေပါ———
ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအမှန်တ၇ားကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးထားတဲ့ဇာ
တ်လမ်းတွေ(ဥပမာ————- သိကြားမင်းနဲ့မယ်လမုကမွေးလို့occalapa ဘု၇င် ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေ) နဲ့ေ၇ာပြီး
ထေ၇၀ါဒ၇ဲ့စစ်မှန်တဲ့မှတ်ကျောက်နဲ့သမိုင်းကို ဖုံးကွယ်မ၇နိ်ုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြားမှာ
နောင် ညီငယ် ညီမငယ်များ လက်ထက်ေ၇ာက်မှ ပြူးပြဲပြီး ပြသနာ လုပ်နေကြမှာစိုးလို့ ပါ————
ဟုတ်ကဲ့တဖုသတို့မြန်မာပြည်က ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာေ၇ာ
ဆံတော်၇ှုင်ေ၇ွှတိဂုံ စေတီတော်မြတ်မှာ ဘု၇ား၎ဆူလုံး၇ဲ့မွေတော်များ စုပေါင်း တည်၇ှိနေတယ်ဆိုတာေ၇ာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးး မည်သို့ မှ ထင်မြင်ချက်မပေးလိုပါ သယ်ချင်းများကြိုက်သလို ယူဆနိုင်ကြပါသည်—
( ဘယ်လိုမှ မယူဆချင်လည်း၇ပါသည်)
အခု တင်ပြထားတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး —- အပြုသဘောဆောင်သော comment များကို မျှော်လင့်လျက်—————-
ဘလိက စာလုံးပေါင်းမှားနေတာ သိပါတယ် ကီးဘုတ် စုတ်နေလို့ပါဌ်ဆင့် တွေ နှိပ်လို့ မ၇လို့ ပါ)
___-___–+++++++++++++++++++သူများပါးစပ်ဖျား လမ်းမဆုံးပါစေနဲ့ ——(–မိုးကုတ်ဆ၇ာတော်ဘု၇ားကြီး)
ကျတော်တို့ ၇ဲ့ဦးစွန်း –
မြန်မာတွေ၇ဲ့မကိုဋ်—–
ပကတိ ဖြူစင်မှု ——-ဘယ်လိုအ၇ာ လာလို့ တုနိုင်ပါ့———–
ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာတိုင် စဉ်ဆက်ကာလှိုင်လှိုင် ဝေမယ့်
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဆံတော်ကိန်းး၇ာ –
ဘု၇ား ရွှေတိဂုံကြောင့် ငါတို့ ကို ဘယ်သူ ယှဉ်နိုင်ပါ့မလဲ————
ငါတို့ ဟာ———-ရွှေနိုင်ငံက သူတွေပဲလေ———–
ေ၇ွှတိဂုံ ၂၆၀၀ပြည့် အမှတ်တ၇ ပူဇော်ပါသည်(ခုမှ ချက်ချင်းေ၇း၇ပါသောကြောင့် အဆီအငေါ် မတည့်၇င် ခွင့်လွှတ်ကြပါနော်———)
Ref> ယူထားတာက- ven. kawsammla, နဲ့–ven. sthumingala & some other information based on scientific facts———–ပါခဗျာ————
အခုပဲ မောင်ရင်ကိုယ်တိုင် ပြူးပြဲပြီးပြဿနာ လုပ်နေပါသကော…
ကိုယ့်အတွေးကိုယ် ရဲရဲရေးတာ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဖတ်သူတွေကလဲ သူတို့အတွေးနဲ့သူတို့ ရဲရဲကြီး ပြန်မန့်မှာ မျှော်လင့်ထားပါနော…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ တူမောင့်နောက်မှာ သူကြီးတယောက်လုံးရှိတယ်
ကျုပ်ကတော့ ကြောက်တတ်လို့ ဒါမျိုးဆို အနားကိုမသီဘူး….
အခုလဲ လစ်ပြီနော …..
---မိုးကျေ၇ွှကိုယ်-----dennis rockstar says:
တူလေးက သူကြီးဘယ်သူဆိုတာ သိတာ သိပ်မကြာသေးဘူးခဗျ——၁လကျော်ကျော်ပဲ၇ှိသေးတယ်—-
တကယ်ပါ—အကြောင်းအ၇ာတစ်ခုအပေါ်မှာ ကျတော်တို့အမြင် တွေ ကွဲ ပြီး —- ကျတော်က တော်တော်လေး ပြောခဲ့ဖူးတယ်–(အဲဒီတုန်းက သိလည်း ပြောမှာပဲဗျို့ ) ——
အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တစ်ချက်ကလွှဲ၇င်– ကျတော်တော့ သူကြီးကို —–တော်တော်ကြီး applaud လုပ်ပါတယ်——–
တခြား အကိုအမများလည်း ကျတော့ စာထဲမှာ အမှားပါ၇င်
——— အကြောင်းအကျိုး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ထောက်ပြဝေဖန်ပေးကြပါနော်–
ဟဲ့ … အလကားပြောတာ
ကွန်မင့်တွေ ခဏစောင့်ပြီး ၀င်ပြောဦးမှာ…….
ရွာထဲမှာ အသံတိတ်နေတာ နဲနဲကြာပြီ ။မကြာခင် အပြင်းပြေတော.မယ်နဲ.တူတယ် …။
ခေတ်အဆက်ဆက် သမိုင်းဆရာတွေ လက်ရှောင်ထားတဲ.ကိစ္စ ၊မောင်ရင်ကဒုတ်နဲ.ထိုးတော.
ဟဲ ဟဲ ပွဲကလှသွားပြီ ။ဗိဿနိုး ၊ ဟန်လင်း ၊ သရေခေတ္တရာ ၊မကျေနပ်ရင် ကြိုက်သလောက်တူး
ကြည်.လို.ရတယ် …..စေတီပုထိုးကိုတော. ဘယ်လိုသတ္တိနဲ. သွားတူးကြည်.ရမလဲ။ဲပြီးတော. ..သမိုင်း
ဆိုတာကလဲ ဘုရင်လက်ထက်အဆက်ဆက်မှာ အဆင်ပြေသလိုရေးလာတာ (ဘုရားသမိုင်းကိုပြောတာ
မဟုတ်ဘူးနော် နိုင်ငံ.သမိုင်းတွေကိုပြောတာ) ဆိုတော. …..ယုတ်တိ ဆန်ဆန် စဉ်းစားနေရင်
ဘယ်ဘုရားမှ မောင်ရင်ကန်တော.လို.ရမှာမဟုတ်ဘူး။ချွန်ချွန် မြင်တိုင်းကန်တော.ဘို. ပြောတာမဟုတ်ဘူး
နော် …..သိပ်စဉ်းစားပြီးအဖြေရှာရင်အကျိုးမများဘူး ……ဒီအလောင်းအစားကကြေးကြီးတယ်။
သံသရာမှာအကြွေးဆပ်ရမှာ ……ကျုပ်ကတော.လက်ရှောင်တယ်ဗျို. …..။
ဟဲလိုကိုဒင်းနစ်ရေ လေးဆူဓါတ်ပုံရွှေတိဂုံဘုရားသမိုင်းကို သို.လောသို.လောနဲ့မဟုတ်တဲ့အတွေးမျိုးမဖြစ်
စေချင်ဘူးဗျာ ဘိုးဘေးဘီဘင်က အရိယသူတော်စင်များဆင့်ကဲဆင့်ကဲထိန်သိမ်းစောင့်ရှောက်လာခဲ့တဲ့
ထေရ၀ါဒဗုဒ္စသာသနာကိုတော့ မညှိုးနွှမ်းစေချင်ဘူးဗျာ ရွှေတိဂုံသမိုင်းအကြောင်းအတိအကျသိချင်ရင်
ကျနော်တို့မြတ်ဘုရားကဲ့သို့ကြည်ညိုအားထားရသော သီတဂူဆရာတော်ကြီးသာ မေးလျှောက်ကြည့်ဖို့
ညီပြောတဲ့ case ကြောင့်တော့ ထေ၇၀ါဒ သာသနာတော်ကြီး ဘယ်လိုမှညိုးနွမ်းစ၇ာ အကြောင်း မ၇ှိဘူး လို့ညီမြင်တယ်ခဗျ——– ညီ ပြောတဲ့ အချက်တွေမှာ-ဘု၇ားဟောကို ကန့် လန့် တိုက်တဲ့စကားတစ်လုံးမှ မေ၇းထားပါဝူး ခဗျ-နောက်သူများ အသက်သတ်ဖို့သူများ သားမယား ပစ်မှားဖို့အ၇က်သောက်ပြီး မူးယစ်ယမ်းကားဖို့ တစ်လုံးမှ ပါပါဘူးခဗျာ အဲဒီ အတွက် တော့ တာဝန်ယူပါတယ်ခဗျာ ညီေ၇းတဲ့ စာနဲ့ ပတ်သက်ပီး
အခုက မြတ်ေ၇ွှတိဂုံစေတီတေ်ာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒွိဟဖြစ်စ၇ာ သမိုင်းအချက်တွေ ကို နည်းနည်း ထောက်ပြ၇ုံပါခဗျာ——–ေ၈ွှတိဂုံ စေတီတော်ကြီးအပေါ် ညီ့ သဘောထားကို ကျတော့ ကဗျာ ထဲမှာသေသေချာချာေ၇းထားပါတယ်ခဗျာ—– တကယ်လို့ အဲ့လို ဖြစ်သွားတယ်ဆို၇င်လည်း
နောက် ဒီလိုမျိုးတွေ မတင်ဖို့ညီ ဆင်ခြင်ပါ့မယ်ခဗျာ——— comment ၀င်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါအကို -ရှဲရှဲ
(ပရမတ္တ)ပေါင်း = ၈၄၀၀
ဟီးဟီးးးးး ကျတော်က အာဂုံ ဆောင်ထားချင်တာပေါု့
ပိဋကတ်၃ပုံ အာဂုံဆောင်ပြီး ဒီတုိုင်းနေတာထက်စာ၇င်
အများကြီး မသိလဲ သိတဲ့ နည်းနည်းလေးက အမှန်ဖြစ်ဖို့ ကို
ေ၇ွှတိဂုံ စေတီတော် နှစ် ၂၆၀၀ အထိမ်းအမှတ်
ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားကို ဦးစွာနာယူ ပြီးမှ
ဆွေးနွေး ကြဖို့ အကြံ ပြု လိုပါတယ်
ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေက ကျုပ်တို့မမွေးခင်ထဲက အငြင်းပွားလာကျတာဗျရိုးနေပြီ ။ရွာထဲကဆရာ့ဆရာကြီးတွေကအဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။
မှန်ပါတယ် ကိုမိုးကျ ရေ.. အခုလိုလေးပြောတာကိုတော့ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ… မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေကသာ ဘုရားသာသနာ ကို အရင်ဆုံးကြုံရတာ ဘာညာနဲ.လျှောက်ပြော လျှောက်ရေးနေကြတာ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို. ရဲ. ဗုဒ္ဒဘာသာ တွေက ဗုဒ္ဒဘာသာ ဆိုပြီး ပြောတိုင်းယုံ သီခံ ရှေ.လူကြီးတွေ ပြောတာ ဆိုပြီး ပါးစပ်ရာဇ၀င်တွေနဲ. လျှောက်ပြောတဲ့ဟာတွေ ကိုယုံ သမိုင်းအမှားတွေ လူငယ်တွေ က သိကုန်ရော..
ကိုမိုးကျ ပြောတာ သဘာဝကျပါတယ်… ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်ဗျာ
မဖြစ်နိုင်တာတွေကို.. ဖြစ်ပါတယ်အတင်းလုပ်နေကြတာဟာ.. မမှန်တာတွေကို.. မှန်ကန်ပါတယ်..လုပ်ကြတာဟာ.. မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာ.. သန့်ရှင်း။တည်တန့်။ပြန့်ပွားရေးအတွက်.. အကြီးအကျယ်အတားအဆီးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ.. သတိမထားမိကြဘူးဖြစ်နေတယ်လို့..သုံးသပ်မိပါတယ်..
မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာ..ဘာသာကိုးကွယ်သူ သန်း၅၀မရှိတာဟာ.. ဒါတွေကြောင့်ပါပဲ..
ပွင့်လင်းမြင်သာ.. ဆွေးနွေးပြီးရှင်းလိုက်နိုင်ရင်.. မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်လိုသူတွေ.. သန်းပေါင်းများစွာတိုးလာမှာပါ..
၀ါဒရေးရာမှာ.. ထိပ်တန်းသမားတွေကို ညွတ်ကျအသိအမှတ်ပြုစေနိုင်တဲ့..တရားတွေ စုပုံရှိတယ်.
ဒါတွေကို.. ဂမ္ဘီရတွေရှေ့ကလုပ်ပြကြတော့..တရားစစ်တွေ ကွယ်စေကုန်တာပေါ့..
မမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုမှန်ကန်တယ်လို့မပြောပါနဲ့ မတရားတဲ့ကိစ္စကိုတရားတယ်လို့မပြောပါနဲ့။ မတရားတဲ့ကိစ္စကို တရားတယ်လို့မပြောပါနဲ့ အဲဒါနဲ့စပါ။ နောက်တစ်ဆင့်ကျမှ မှန်တဲ့ကိစ္စကို မှန်တယ်လို့ပြောရမယ်။ မှားတဲ့ကိစ္စကို မှားတယ်လို့ပြောရမယ်။ ပထမဦးဆုံးအဆင့်ဟာ သိပ်အမြင့်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်။ စပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဖို့လိုတယ်။ မမှန်တာကို မှန်တယ်လို့မပြောပါနဲ့။ မတရားတာကို တရားတယ်လို့မပြောပါနဲ့။ ဒုတိယအဆင့်ကျရင်တော့ မမှန်တာကို မမှန်ဘူးပြောပြီးတော့ မှန်တာကို မှန်တယ်လို့ထောက်ခံရဲရမယ်။ အဆင့်ဆင့်တက်သွားရမယ်။ (လက်ခုပ်သံများ) ဒီလိုအဆင့်ဆင့်တက်သွားနိုင်မှ ဒီနိုင်ငံဟာတိုးတက်မယ်။ တိုးတက်တယ်။ ပြည်သူတွေက တိုးပြီးတော့ တက်မှ ဒီနိုင်ငံဟာတိုးတက်မှာလို့ ကျွန်မတို့ မှတ်ထားရမယ်။ (လက်ခုပ်သံများ)
အမတို့ကတော့ Dennis လို ရွှေတိဂုံဘုရားသမိုင်းကဘယ်လိုလဲဆိုပြီး သံသယအတွေးတွေနဲ့
ထင်ယောင်ထင်မှားအငြင်းပွားစရာလို့ မမှတ်ယူပါဘူး…သမိုင်းဆိုတာ ဟုတ်တာရော၊မဟုတ်တာရော
ရောယှက်နေတဲ့အတွက် ဒါကိုလိုက်စစ်လို့လဲမရပါဘူး… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရွှေတိဂုံဘုရားသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
တို့ရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားကိုးကွယ်ရာ သာသနာ့ဥသျောင်ပါပဲ၊ ကမ္ဘာ့အံဖွယ်ထဲမှာ မှတ်တမ်းပါပြီးသားဖြစ်ပြီး
ယိုးဒယားမှာရှိနေတဲ့ မြစိမ်းဘုရားသမိုင်းကတော့ သူတို့ပြောတိုင်းအမှန်ပါလို့ရောပြောလို့ရမလား။
အဲဒီလိုသိပ်နက်နက်နဲနဲတွေမတွေးပါနဲ့ကွာ……… ရွှေတိဂုံဘုရားဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်မြင့်စေမယ့်
အဟီး .. မိုက်တယ် .. ဒီလိုမျိုးတွေးနိုင်တဲ့ဥာဏ် ကိုလည်း အားကျတယ် . ကျွန်တော်လည်း အဲ့လိုတွေးတတ်ချင်တယ် .. တကယ် .. ခုတော့ ကျွန်တော်တွေးမိတာလေး မျှဝေကြည့်မယ်နော် ..
ကျွန်တော်က တော့ သမိုင်းကို နောကျေ အောင် သိတဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော့် မှာ အတိတ်ကို ပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့ စက်လည်း မရှိပါဘူး (တချိန်ချိန် ကျရှိချင်ရှိလာမှာ ) ..
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဥာဏ်ပညာလေးများ ကလည်း မပြည့်မစုံပါဘူး ..
ကျွန်တော် မဆွေးနွေးတတ်ပါဘူး .. မှန်၏မှား၏ ဆိုတာကို လေ ..
ဒါပေမယ့်လည်း ရွှေတိဂုံ စေတီဟာ နိုင်ငံကျော်တဲ့ စေတီတစ်ဆူဆိုတာ တော့ မမှားပါဘူး နော ..
ရွှေတိဂုံဟာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဒဘာသာရဲ့ ပြယုယ် (မပေါင်းတတ်တော့ပါဘူး)
ရွှေတိဂုံဟာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား များရဲ့ မရောက်မဖြစ်တဲ့နေရာ တစ်ခုပါ။
ရွှေတိဂုံ ကြောင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေ ပိုပြီး လိမ္မာလာစရာ၊ ယဉ်ကျေးလာစရာတွေ ဘဲရှိတယ်ဆို ရင်လည်း ပြောလို့ရပါတယ် .. ဟုတ်တယ်နော်
ရွှေတိဂုံ ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပိုပြီး တိုးတက်လာစရာအကြောင်း တွေလည်းရှိပါတယ် ..
ရွှေတိဂုံကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဆုတ်ယုတ်သွားစရာတော့ အခြေအနေသိပ်ကိုနည်းလွန်းလှပါတယ် ..
ရွှေတိဂုံ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက် ၊ မြန်မာ လူမျိုးတွေ အတွက် ဂုဏ်ယူစရာ၊ ၀မ်းသာစရာ၊ ကြည်နူးစရာ၊ ကျေနပ်အားရစရာ အဖြစ်နဲ့ တည်ရှိနေတာကြောင့် .. သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကြောင်း က ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့၊ နောက်ဆုံး ဘုရား အမွေတော် စစ်စစ် မစစ်စစ် အရေးကြီးပါသေးသလား ? သူဟာ ယခုအချိန်မှာ မြန်မာ့ ကြက်သရေဆောင်၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ကိုတိုးတက်စေမယ့် နေရာတစ်ခု၊ ဗုဒ္ဒဘာသာရဲ့ အလွန်သပ္ပာယ်သော၊ အလွန်ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းသော၊ ဘုရားတစ်စူ အဖြစ်နဲ့ အချိန်တွေ အကြာကြီး စံမြန်းနေအုံးမှာပါဘဲ .. ကျွန်တော် ခံစားမိတာပါ ..
(အတိတ်ကအကြောင်းတွေက အရေးကြီးပါတယ် .. ဘယ်အချိန်မှာလဲ ဆိုတော့ သမ္မတဖြစ်တော့မယ့်အချိန် လိုမျိုးပေါ့.. ဒါပေမယ့် သမ္မတ ဖြစ်ပြီးသွားရင်တော့ အတိတ်ဆိုတာ အရေးမကြီးတော့ဘူးလို့ ယူဆမိပါတယ် )
ကျွန်တော် က ကိုမိုးကျရွှေကိုယ်ကို တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး .. ကိုမိုးကျရွှေကိုယ်သာ မတင်ပြရင် အဲ့ လိုပြသနာရှိတယ်ဆိုတာ သိချင်မှတောင်သိမှာ .. ဒါပေမယ့် ခုတော့ ကိုမိုးကျရွှေကိုယ် ကြောင့် အကြောင်းအရာတွေ တော်တော်များများ သိသွားပြီ ။ ဒါကြောင့် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. နောက်နောင်လည်း အဲ့လို ဒွိဟလေးတွေ .. ရှိရင် တင်ပြပေးပါအုံး ခင်ဗျာ ..
ဗဟုသုတအနေနဲ့ရော … ဆန်းပြားတဲ့ အတွေးခေါ်ကိုပါ သဘောကျလို့ ဖတ်ပဲဖတ်သွားပြီး ထင်မြင်ချက်တစ်စုံတစ်ရာတော့ မပေးရဲပါဘူး … ။ တစ်ချို့ သမိုင်းတွေ ရာဇ၀င်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး .. မရှင်းမလင်းတာရှိလျှင် … အိမ်က လူကြီးတွေကို ကျွန်မ မေးကြည့်တယ် … သူတို့ကပြောတယ် ..
ဟီးးးးးး အားနာစ၇ာကြီး — မမက ခုလိုအချက် အလက်ကျကျနဲ့ ထောက်ပြတော့လေ
ဒါနဲ့ အမ ဒိဌိက ၆၂မျိုးတောင်၇ှိတာ -ကျတောက ဘယ်အမျိုးအစားထဲပါတာတုံးဗျ-
နောက် အမပေါင်းထားတဲ့ ဒိဌိက မှားနေတယ် — ဠိ ဆိုတာ လိ သံ – ဌိဆိုမှ ထိသံ —ဟီးဟီးးးးးး
မမအိမ်က လူကြီးတွေကို ပြန်မေးပေးပါနော်-ဂျ————-
နောက် အမပေါင်းထားတဲ့ ဒိဌိက မှားနေတယ် — ဠိ ဆိုတာ လိ သံ –
ဌိဆိုမှ ထိသံ —ဟီးဟီးးးးးး
ဆွေးနွေးဖို့တော့ခက်တယ်ဗျာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ ဘာသာမဲ့တွေ၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကပဲ ဘု၇ားသမိုင်းကြောင်းနဲ့ ဘာသာရေးဆိုတာဘာဆိုတာ သိတဲ့သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးကြည့်နိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်။ ငါဟာဗုဒ္ဓဘာသာပါလား အပြစ်များဖြစ်လေမလား ဆိုပြီးတွေဝေမနေရမယ့် လူမျိုးတွေနဲ့ပေါ့….
ဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်ဘူး တခြားတခြားသော ဘာသာတွေမှာလည်း ငြင်းခုန်ရမယ့်အချက်တွေ ရှိနေသေးတယ်
facebook က http://www.facebook.com/groups/132384953532028/ ဆိုတဲ့ group လေးကို သယ်လာပြီးဆွေးနွေးကြည့်စေချင်ပါတယ်ဗျာ။